Heshiisyada Maalgelinta Xuduudaha ee Dalxiiska & Madadaalada Wadar ahaan $ 1.5 Billion Q2 2021
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Safarka Ganacsiga » Heshiisyada Maalgelinta Xuduudaha ee Dalxiiska & Madadaalada Wadar ahaan $ 1.5 Billion Q2 2021
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Investments • Shirka Warka Warshadaha • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Isbarbardhigga qiimaha heshiisyada xuduudaha ee gobollada kala duwan ee adduunka, Yurub ayaa qabatay booska ugu sarreeya, iyada oo wadarta heshiisyada lagu dhawaaqay ay ku kacayaan $ 1billion muddadaas.
$ 650 milyan oo maalgelinta mashruuca FlixMobility ayaa liiska ugu sarreeya.
Jarmalka ayaa liiska ugu sarreeya marka la eego qiimaha heshiiska oo ah $ 745.23 milyan.
Waddanka ugu sarreeya marka la eego dhaqdhaqaaqa heshiisyada maalgelinta hawlgallada xadka ee Q2 2021 wuxuu ahaa Faransiiska.
Wadarta dalxiiska & warshadaha firaaqada ayaa ka gudbaya heshiisyada maalgelinta mashruuca xuduudaha oo qiimihiisu yahay $ 1.5bn oo caalami ah ayaa lagu dhawaaqay Q2 2021, oo uu hoggaaminayo $ 650m maalgelinta mashruuca FlixMobility.
Qiimaha ayaa calaamad u noqday koror dhan 421.4% rubucihii hore iyo koror ah 509.4% marka la barbardhigo celceliskii afartii rubuc ee ugu dambeysay, oo taagnaa $ 242.88m.
Isbarbardhigga qiimaha heshiisyada xuduudaha ee gobollada kala duwan ee adduunka, Yurub ayaa qabatay booska ugu sarreeya, iyada oo wadarta heshiisyada la shaaciyey ay ku kacayaan $ 1bn muddadaas. Heerka dalka, Jarmalka ayaa kaalinta koowaad ka galay qiimeynta qiimaha oo ah $ 745.23m.
Marka la eego mugga, Yurub waxay u soo baxday inay tahay gobolka ugu sarreeya ee dalxiiska & warshadaha firaaqada ah oo ka gudbaya heshiisyada maalgelinta maalgashiga xuduudaha adduunka, oo ay ku xigto Aasiya-Baasifigga ka dibna Waqooyiga Ameerika.
Waddanka ugu sarreeya marka la eego dhaqdhaqaaqa heshiisyada maalgelinta hawlgallada xudduudaha Q2 2021 wuxuu ahaa Faransiiska oo leh saddex heshiis, waxaa ku xigay Jarmalka oo saddex leh iyo Hindiya oo saddex leh.
Sannadka 2021, dhammaadka, heshiisyada maalgelinta ganacsiga xudduudaha ee qiimihiisu yahay $ 1.5bn ayaa looga dhawaaqay adduunka dalxiiska & warshadaha firaaqada, taasoo muujineysa hoos u dhac 243.1% sanadkiiba.